प्रम ओलीवि’रुद्ध बीजेपी नेताको चेतावनी: नेपाल भारत सम्बन्धमा फाटो ल्याउन खोज्नेलाई इतिहासको टोकरीमा फ्याँक्नेछौं – Sanchar Patrika
प्रम ओलीवि’रुद्ध बीजेपी नेताको चेतावनी: नेपाल भारत सम्बन्धमा फाटो ल्याउन खोज्नेलाई इतिहासको टोकरीमा फ्याँक्नेछौं
July 14, 2020 253
काठमाडौं। भारतीय जनता पार्टीका सांसद एवं पूर्वमन्त्री सुब्रमण्यम स्वामीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अभिव्यक्ति हाँस्यास्पद भएको दा’बी गरेका छन्। जी टिभीसँग कुरा गर्दै भाजपाका वरिष्ठ नेता स्वामीले प्रधानमन्त्री ओलीले अयोध्याबारे दिएको अभिव्यक्ति हाँस्यास्पद भएको बताएका हुन्। उनले ओलीमाथि आफूलाई दया लागेको पनि बताए। ‘ओलीको बयान हाँस्यास्पद छ। हामीलाई ओलीमाथि क्रो’ध हैन दया लाग्छ। थाइल्याण्डमा पनि अयोध्या छ। उनीहरुले पनि दा’बी गर्‍यो भने के हुन्छ? केही फरक पर्दैन। विश्वले नै भारतको अयोध्यालाई मान्‍छ,’ उनले भने।
नेपालमा ओली आफ्नो अस्तित्वका लागि ल’डिरहेको, नेपाली जनताले साथ छोडेको टिप्पणी गर्दै स्वामीले नेपाललाई चीनको दासीको रुपमा प्रस्तुत गरेको आरोप लगाए। ‘ओली चाहन्छन् कि भारतवि’रुद्ध घृ’णा फैलाउ, त्यसको बद’लामा भरतले केही कदम चालोस्। नेपालमा भारतवि’रोधी भावना बढोस् र उनको पछाडि उभियोस्,’ उनले भने।
नेता स्वामीले रामायणमा सानो भन्दा सानो विवरणले सबै कुरा भारतमा देखाएको, गुरु नानकले पनि अयोध्यामा गएर राम मन्दिरको पहिचान गरेको, तुलसीदासले त्यहाँ गएर पुस्तक, ग्रन्थ लेखेको तथ्य प्रस्तुत गर्दै नेपालबाट कुनै एकले केही लेखेको छ? भनी प्रश्न गरे। स्वामीले प्रधानमन्त्री ओली यो मु’द्दाबाट पछि नहटे सम्पूर्ण विश्वसनीयता गु’माउने चेतावनीसमेत दिए। ‘भागवत गीताका अनुसार क्रो’धले बुद्धि ख’राब हुन्छ। ओली क्रो’धबाट पा’गल भइसकेका छन्। अब उनी यो मु’द्दाबाट पछि ह’ट्नुपर्छ। नत्र भने उनको ब’चेखु’चेको सबै विश्वसनीयता गुम्नेछ,’ उनले भने।
स्वामीले ओलीलाई महाभारतका दुर्योधनसँग तुलना गरे। जसले आफ्नो हठका कारण राज्य गुमा’ए, ज्यान पनि गु’माए। साथै स्वामीले चीनलाई सकुनीसँग जोडे। रामले राज्य बचाउन आफूलाई त्याग गरेको, पत्नीलाई त्यागेको बताउँदै स्वामीले सत्ता बचाउन ओलीले मित्रतालाई नै तिलाञ्जली दिएको टिप्पणी गरे। ओलीलाई त्यागी पुरुष रामको नाम लिने अधिकारसमेत नभएको उनको भनाई छ।
अहिलेको नरेन्द्र मोदी सरकार र अघिल्ला सरकारले नेपालसँग गरेको व्यवहार नराम्रो भएको र त्यसको आफूले आलोचनासमेत गरेको स्मरण गर्दै स्वामीले यी कुरालाई लिएर सम्बन्ध नै तोड्न खोज्नु ग’त भएको बताए। ‘नेपाल हाम्रो छोटा भाई होइन। मित्र हो। सानो ठूलोको सवाल नै छैन। जुन प्रकारले हाम्रा सरकारी कर्मचारी व्यवहार गर्थे, युरोपसामु झुक्थे, नेपालसामु बडा रवाफ देखाउँथे। यी सबै गल्ती मान्न हामी तयार छौं। यी कुरालाई लिएर सम्बन्ध नै तोड्न खोज्ने? पशुपतिनाथ कहाँको हो? त्यसकारण यो विषयलाई हामीले धेरै महत्व दिनु हुँदैन,’ उनले भने।
स्वामीले उपयुक्त समयमा नेपाललाई जवाफ दिइने र ओली अब पनि सच्चिएन भने रावणको हालत हुने चेतावनी दिए। ‘हामी जति धेरै ओलीलाई गा’ली दिन्छौं, उनी त्यति नै प्रशंसनीय हुनेछन्। अहिले हँसिमजाक ठीक छ। मौका मिल्ने बित्तिकै हामी नेपालाई देखाइदिनेछौं कि हिन्दुस्तान के हो भनेर। जसरी रावणलाई देखायौं त्यसरी उनलाई पनि देखाउँनेछौं,’ उनले भने। ओलीलाई चीनले नउकासेको भन्दै स्वामीले थपे, ‘तर चीन उनलाई गुलाम बनाउन चाहन्छ र उनी बनिसकेका छन्। उनी के बोल्छन् चीनलाई मतलब छैन,’ उनको तर्क छ।
स्वामीले नेपाल भारत सम्बन्धमा फाटो ल्याउन खोज्ने व्यक्तिलाई इतिहासको टोकरीमा फ्याँक्ने चेतावनी दिए। ‘हामी भविष्यमा नेपालसँग मित्रता देखाउने छौं। नेपाल र हिन्दुस्तानबीच फाटो ल्याउन खोज्ने यस्ता व्यक्तिलाई इतिहासको टोकरीमा फ्याँक्नेछौं,’ उनले भने। भारतका जलशक्ति मन्त्री गजेन्द्र सिंह सिखावतले पनि श्रीरामको अस्तित्वमाथि प्रश्न उठाउनेको आफ्नो अस्तित्व आज ख’तरामा परेको बताए। सत्ता बचाउन धार्मिक कुरा उठाउनु जायज नभएको उनको भनाई छ।
Prevहवाई उडान खोल्न सरकारले थाल्यो यस्तो तयारी, बन्द हुँदा ठूलो आर्थिक नोक्सानी भो’ग्नु परेको खुलाशा !
Next‘नेपाल आइडल–३’ साउन दोस्रो साताबाट
अब घरबाटै कोरोना परिक्षण गर्न सकिने, करिब ३० मिनेटमा रिपोर्ट आउने !